Inotaurisa: Vaka, Teedzera, Bvunzo, uye Ongorora Kutumira Zvirongwa zveEcommerce | Martech Zone
Inotaurisa: Vaka, Tevedza, Bvunzo, uye Ongorora Kutumira Zvirongwa zveEcommerce
Chipiri, January 30, 2018 Chishanu, February 2, 2018 Douglas Karr
Maererano Izwi reMuromo Kushambadzira Association inoshuma kuti zuva rega rega muUnited States, mune nhaurirano dzinosvika mabhiriyoni 2.4 ane chekuita nemhando. Sekureva kwaNielsen, 90% yevanhu vanovimba bhizinesi kurudziro kubva kune mumwe munhu wavanoziva
Maitiro ekutenga akachinjwa munharaunda kubva pakutanga kwenguva. Nguva refu pasocial network senge Facebook neTwitter zvakakuchengeta iwe mune chaiyo chiuno, yako yepanyama network yanga ichikanganisa izvo zvawakatenga uye kwawakatenga kubva. Muchokwadi, izwi remuromo ndiro simba rine simba kwazvo mukutyaira bhizinesi idzva. Izvi zvinodaro nekuti shamwari dzinoziva zvaunoda kutenga, nguva yaunoda kuzvitenga, uye nemabatiro azvinoita kwauri. Kutaura
Kutaura kunobatsira makambani eEcommerce kuwana vatengi vatsva uye kuwedzera kutengesa
Vakai inogadziriswa Refer a Shamwari zvirongwa. Iyo inotaurika chikuva inoshanduka zvachose maererano nekuti ndiani mushandirapamwe anonanga, anotaridzika sei, ndiani anopihwa mubairo, uye nemubairo wavanopihwa.
njanji yega yega yekutenga saiti uye yevatengi mugove wekupa mubayiro vanotsigira uye shamwari chete pavanosangana neyako yakatsanangurwa mushandirapamwe
bvunzo inopa kuwedzera chirongwa chekutumira kuita. Mhando dzinofanirwa kuwana chiyero chakaringana pakati pehukuru hwechipo uye nhamba yekutengesa inogadzirwa. Iyo chikuva zvakare inokutendera iwe kuA / B bvunzo dhizaini, kopi, uye mushandisi kuyerera.
ongorora nhanho yega yega faneli; kubva pamasheya kusvika pakudzvanya kunzvimbo dzekushanyira kunzvimbo yekutenga. Kutaura kunopa data rekutumira iwe raunogona kuvimba.
Talkable ine-bhatani kumisikidza neShopify, Magento, uye Demandware. Kana iwe ukashandisa imwe e-commerce chikuva, Talkable ine yakanyorwa API.
Unoda rumwe ruzivo? Talkable yakaburitsa bhuku reRefertral Kushambadzira rinonzi Kubva kuSainzi Kutenga, neruzivo rwekuti kushambadzira kwekutumira chii, nei kuchishanda kwazvo, marii yaunofanirwa kubhadhara kune vanoendesa, uye maitiro ekuvaka nzira yekubudirira yekutengesa.
Dhawunirodha Kubva kuSainzi Kutenga
Tags: APIDemandwareeBookecommerce kutumirakubva sainzi kutengahandbookMagentokuendesa bhonasikutumira kushambadzirachirongwa chekuendesashopifykutauraWhitepaper